ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ မဟုတ်ကြောင်း အင်ဒို သမ္မတ ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ မဟုတ်ကြောင်း အင်ဒို သမ္မတ ပြောကြား ကမ္ဘာမှာ မူဆလင်ဘာသာဝင် အများဆုံးရှိရာ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ဆူဆီလို ယူဒိုယူနိုက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနေကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဆူဆီလို ယူဒိုယူနို(Susilo Bambang Yudhoyono) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က သြစတြေလျနိုင်ငံ ဒါဝင်မြို့တွင် သြစတြေလျ နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် တွေ့ရစဉ်။
အနောက်ဂျားဗားရှိ သူ ရဲ့နေအိမ်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတ ယူဒိုယူနိုက သူ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေကို တတ်နိုင်သမျှ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ဘက်မလိုက်ဘဲ ကြိုးစား ရှင်းပြနေတာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်၊ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပက္ခဟာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ မဟုတ်ဘဲ ဒေသတွင်း လူုအုပ်စုကြား ဖြစ်ပွားတဲ့ ပဋိပက္ခသာဖြစ်ပြီး အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ရိုဟင်ဂျာတွေက မူဆလင်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေတာသာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ကပြောပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဇာတိဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ မျိုးဆက် လေးဆက်လောက် နေထိုင်လာတဲ့ သူတို့ကို မြန်မာအစိုးရက တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ ထဲ့သွင်းမှု မရှိသေးဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီပဋိပက္ခမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၂၈၀၀၀ ကနေ ၅၃၀၀၀ ထိ များပြားလာကြောင်း၊ စာရင်းအရ ရခိုင် ဒုက္ခသည် ၂၄၀၀၀ ရှိနေကြောင်း၊ ဝေဖန်သူတွေက မြန်မာအစိုးရဟာ ရခိုင်တွေကို ဦးစားပေး နေတယ်လို့ ဆိုကြပေမဲ့ တဖက်မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပိုရနေတယ်လုို့ ရခိုင်တွေက သတိမူ သဘောပေါက် ထားကြောင်းလည်း ပြောဆိုပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပြဿနာ ဖြရှင်းရေးအတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနေနဲ့ သံတမန် လမ်းကြောင်းက တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့စာပေးပို့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ရှင်းပြသွားပါတယ်။
ပိတ်ဆို့မှုတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ အမေရိကန်အမတ် ထောက်ခံ
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ အိုဘားမား ကြိုဆို၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ သတိပေး
မုန်တိုင်းရှောင် ဒုက္ခသည်တွေကို မူရင်းနေရာတွေဆီ ပြန်ရွှေ့
မူဆလင် ဒုက္ခသည် ၅၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးနေဆဲ မောင်တောမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ နေရာပြောင်း ဖို့ ငြင်းဆန်
ကနေဒါမှာ ရိုဟင်ဂျာဘာသာကို စတင်သင်ကြား
Jan 12, 2013 05:32 PM
လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက
ပြည်တွင်းမှာ အစဉ်အဆက်နေခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေနဲ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တစ်အိမ်တည်း မှာနေနေတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ ရန်ဖြစ်ကြတာပဲ၊ ဒါဟာဒေသတွင်း ကိစ္စလေ၊ နိုင်ငံတကာအရေးမှ မဟုတ် တာ၊ လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။
ကဲ...ဒါဆိုရင် ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေဘဲပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း နေပြည်တော် လွှတ်တော်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရောက်နေတာဘဲကြည့်လေ။
Aug 12, 2012 02:02 PM
Immigrant minister U Khin Yee said inapress conference that Arakan and Bingali are brotherhood who are living in the same house since long long ago.
It means Bangali are same rank with Arakan and also Myanmar ethnic as Arakan.
You see ! some Arakan kings had Islamic title or names which were embedded on ancient silver coins.
Aug 12, 2012 01:20 PM